"I ukuzwa embukisweni! "Titanic": wazithola emkhunjini edume "Ngakho bakhangwa iphrojekthi nesithakazelo sehlakalo somphakathi abagqugquzeli. Bazithola "Titanic", ngaphandle kokungabaza, ezithakazelisayo. Kodwa into - manje aphephile. Lapha izixuku zathuthelekela 'Afimall City ": embukisweni" Titanic "akazange ashiye ubani ngabandayo.
Laliyini leli umkhumbi
"Titanic" - kabuhlungu eyaziwa cruise liner. Ngesikhathi ukuqaliswa yayo, njengoba kwenzeka ngo-1911, kwaba umkhumbi ngobukhulu umgibeli emhlabeni.
amathikithi lokuqala ekilasini ukuze izindleko umkhumbi kusukela ngo-1100 kuya ku-49 000 zamaRandi (okusekelwe izinga lokushintshisana ngo-2013). Ukuze izinsizakalo bangoFakazi zokudla, izinkantolo tennis, ukubhema yabagibeli, umdanso iphansi, amahholo ukuze squash. Ukuze omunye apholile eqolo adjoined siqu emphemeni ubude 12 metres. Ukuhlobisa onezitezi, amahholo kanye namakamelo ekilasini lokuqala ku "Titanic" lakhanya ngegolide, velvet noluhlala eziyigugu. Cabin wesibili kanye amakilasi lwesithathu enikezwe nesizotha kakhulu, kanye fares kwaba cishe $ 600 $ 200 (iguqulwe, vele), ngokulandelana.
"Unsinkable" yaqanjwa ngokuthi ngaphambi kokuqala ku "Titanic" cindezela. Ngeshwa, abezindaba banephutha.
April 10, 1912 "Titanic" kwesokunxele ethekwini Southampton, ukwenza indiza enqamula. Kwaphela izinsuku ezine umkhumbi esendleleni. Ngobusuku buka-14 ku-Ephreli 15, 1912 umkhumbi ishayisane yeqhwa. Ngemuva kwamahora 2 nemizuzu engu-40 ngemva kwalokho, "Titanic" yacwila. Le nhlekelele kwabulala abantu 1495.
Le nhlekelele, owenzeka ngo-1912 ne "Titanic", Ngeke neze ngcolile yonke emlandweni wesintu. Uma kuqhathaniswa, umkhumbi-German "Goya" yacwila ngo-April 1945. Kwakuthinta torpedoed ngumuntu ngwenya okuqondene eSoviet Union Army. Khona-ke wabulala abantu abangaba yizinkulungwane eziyisikhombisa. Uma sithatha ku-akhawunti kuphela nenhlekelele ezenzeka sokuthula, ukufa ngobukhulu nezinezinhlekelele kakhulu angabhekwa sasemanzini umgibeli "Dona Paz" ngo-1987. Umkhumbi ishayisane i nomkhumbi kawoyela. Isibalo yizisulu zale nhlekelele - abantu 4375.
"Titanic" lombukiso "Afimall"
umphakathi emlandweni umkhumbi kwamiswa, cishe ngenxa ifilimu eponymous Dzheymsa Kemerona. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, inani elikhulu izivakashi bahlangana eMoscow labetibambile embukisweni "Titanic." "Afimall" (izithombe nokuzijabulisa eziyinkimbinkimbi ngesikhathi kwenzeka okwethulwa ngayo izinto zethu) Kuyaziwa enhlokodolobha yomphakathi, futhi lesi senzakalo saba ngesinye futhi isizathu ukuvakashela.
Kuhlelwe Abahleli Russian lomcimbi ngosizo nozakwabo American. Lasekuqaleni embukisweni ukubonisa ngesikhathi Franklin Institute e-United States. Umqondo umcimbi eMoscow akuyona ezahlukene ikakhulukazi kulokho eqale iyikho. Ngakho, kwaba kanjani?
Lo mbukiso "Titanic" ( "Afimall"): osukwini lokushintsha
Abanye abafundi namanje ukucasula: umcimbi usuphelile. Wawuthatha kusukela ngoFebhuwari 14 2014 kuya ku-February 15 wamanje. Eqinisweni, cishe kulo nyaka, nesithakazelo kakhulu emlandweni "Titanic" wakwazi ukubona zonke izinto ezenziwe ngesandla iyiqiniso futhi "uye" emkhunjini. Kodwa abahleli umcimbi waveza ukuthi lapho kwaziwa ukuthi lo mbukiso "Titanic" ( "Afimall") Kuzoze kube 15 Februwari 2015 obanzi, izivakashi eziningi isinqumo ungalahlekelwa ithuba lokugcina. Futhi ngosuku lokugcina kulo mcimbi ezinkulu kwaphawulwa lesi saziso.
Njengoba kushiwo ngenhla, isivakashi ngasinye "Afimall" waba nethuba uzithole umkhumbi ziyaphawuleka, ukungcebeleka kanye onezitezi yayo, + ukuze baphenye lolu gumbi ngaphandle ngenxa yokwesabela impilo yawo ukuze usinde ukuphahlazeka. Yebo, yeqhwa naye wayekhona ngalesi embukisweni.
Ngokuthakazelisayo, ziphephile 342 babeboshelwe ngaphambi empeleni okuqondene abagibeli "Titanic." On umlando, awukwazi uthinte.
Mayelana izindima isiphetho
Emnyango zonke isivakashi ithola ithikithi. Kodwa akulona isiqeshana elula iphepha ekhonjiswe ke igama umcimbi, isikhathi kanye nezindleko zokuvakashela. On ithikithi ngalinye wazala igama abagibeli "Titanic" iye yachazwa futhi ezinye ziye kwenzeka umuntu izenzakalo umkhumbi. Cishe zonke isivakashi emcimbini we "Afimall" singaphila isiphetho nezinye - kushabalele, noma, Ngakolunye uhlangothi, baphepha osikweni eminyakeni eyikhulu edlule, edume liner umgibeli.
Kwakufana indaba yendoda kule ithikithi? Okokuqala, kwaba igama, ubudala kanye nomsebenzi. Okwesibili, umlando wayo ahlanganiswa "Titanic", eyanyatheliswa ngesiNgisi nezilimi Russian. Ngokwesibonelo, ithikithi egameni Rosa Amelia iCard equkethwe lolu lwazi olulandelayo. "Ubudala: iminyaka engu-38 ubudala. Umsebenzi: wasendlini. Amelia kwaba maid Marty Stoun, umka wenkampani ucingo "Cincinnati Bell." Kuyaziwa ukuthi phakathi uhambo "Titanic" ngokuvamile Amelia akhononda amaphutha endleleni azinakekela nokuziphatha kwabasebenzi. " By the way, ngaleso sikhalazo futhi ukuphawula okuvela emlonyeni incekukazi kuyacaca ngempela uma ubheka ukuthi lo wesifazane ubehamba no indlovukazi yakhe futhi engumngane kuya ekilasini lokuqala.
Ngemva ithikithi izivakashi embukisweni sasiqhuba ku wayesebhapathizwa bajwayelane imibukiso ukuphahlazeka umsebenzi wokuvuselela izakhiwo.
Sihamba emigwaqweni gumbi futhi emphemeni amahholo, eyakhiwa kabusha for embukisweni, isivakashi ngasinye ungase uthole kangcono ukwakhiwa kanye imishini yezobuchwepheshe emkhunjini, kanye ufunde indlela yokuphila kanye esiyikhethayo abagibeli lahlelwa. Ngakho, kwakunokwenzeka ukuba udabule leli yokudlela futhi bheka amathebula enkulu ukukhonza yokuhlawula ekilasini lokuqala. Kwakunokwenzeka ukuba bakhuphuke bomkhumbi, abanemibono olwandle kanye engapheli besibhakabhaka esinezinkanyezi. Iphinde wazizwa umoya onokuthula umoya ebusuku.
Ngaphezu kwalokho, izivakashi embukisweni waba nalo yini ithuba qhathanisa ilungiselelo apholile emakilasini lokuqala, lesibili nelesithathu. Okunethezeka amafulethi ezibizayo ligolide, velvet futhi skvozyaschim yonke indawo inhlalakahle. abagibeli ekilasini lesibili babehlala kumakhabheni, ngalokwanele okusikhumbuza umhlobiso yesimanje kwamakamelo amahhotela: akukho umbhedo, ifenisha engenabuntu futhi idizayini efanayo kanye emagcekeni ejele. Ekilasini lesithathu yafakwa apholile ukuthi ingaphansi kwamanzi. Kwakukhona imibhede embhedeni, futhi umsindo wamanzi nokugedla ice akazange ukubohla ngeminithi. Kulokhu, amathikithi e kovela ekilasini kumakhabheni ozobhekana nokukhokha elilingana nokuphahlazeka kwezindiza ezimbili isilinganiso wenyanga isisebenzi abavamile American.
Okulandelayo embukisweni ehholo - ukuvuselelwa ukuphahlazeka. Tragedy zaveza njalo, ngakho isivakashi ngasinye unethuba bazibeka endaweni yomuntu ukuhamba ngomkhumbi ukuze usinde Isiphelo sakhe.
Ukuqoqa out ihholo lombukiso nge nokuchaza "kwamanzi", okuyinto lushone umkhumbi kuyo yonke inkazimulo yayo, futhi ekamelweni elincane elalinikezelwe ifilimu Dzheymsa Kemerona.
Kuvele isici esithakazelisayo embukisweni - ukuze ufunde mayelana isiphetho umgibeli, ogama lakhe kwakuthiwa esibekiwe lapho ithikithi kungenziwa kwadingeka egumbini zokugcina. Kwakukhona zezitsha nohlu abasindé nabantu babhubha. Akungabazeki ukuthi ababukeli abaningi bacabanga ukuthi ithakazelisa kakhulu. Manje ngenxa izivakashi lomcimbi.
Lo mbukiso "Titanic" ( "Afimall"): Izibuyekezo
Ukujabulele yini kanye Muscovites futhi izivakashi we dolobha kulesi sehlakalo?
Iningi Izibuyekezo yaba mihle. Lokhu akusona isimanga, ngoba kabusha ukubukeka, le Interiors elingaphansi emkhunjini nciphisa walo wawenziwe obukholisayo kakhulu. Ngakho kubalulekile ukuba sinake futhi yokuthi abaningi kakhulu ziphephile babe bangempela, futhi kuphela okugqugquzelwa umphakathi uma kwenzeka.
Ngaphezu kwalokho, isici esihle mbukiso, izivakashi eziningi ziphawulile, futhi isithembiso ne amathikithi, isipiliyoni isiphetho wangempela abagibeli "Titanic." Funa uhlamvu lakhe izinhlu abasindile noma abafileyo, ngokuvumelana 'Afimall "izivakashi, futhi, Kwakujabulisa kakhulu.
Kodwa zaziba khona izikhathi ezazingezinhle esiyokhunjulwa izivakashi embukisweni "Titanic." Ngakho, isitebhisi phambili womkhumbi, elikhanyayo + ngakho futhi kahle kutjengiswe ifilimu, lalilincane kakhulu, futhi sikhuphukela akunakwenzeka. Ezinye izivakashi baye baphawula yokuthi isimo adventure yaphela ngokushesha ngemva ithikithi, bese izethameli wahlala azizwa kungekho obambe iqhaza kwi-izenzakalo, kodwa nje obukelayo.
Kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani, umcimbi sesiphelile, futhi kwalezi ziqinisekiso Abahleli futhi iningi izivakashi, kwaba yimpumelelo. Abaningi abayohlale belukhumbula, yayiyini lo mcimbi - kwami embukisweni othi "Titanic" ( "Afimall"). Izithombe ezisuka embukisweni isikhathi eside ngesikhathi esifanayo uzonikhumbuza izivakashi izenzakalo abanolwazi kanye nemigqondo wathola.